December 2015 – Page2– Gentleman Magazine
သင့်မိန်းမနဲ့ ဆက်ဆံရတာ ပိုပြီး Hot စေဖို့
သင့်မိန်းမနဲ့ ဆက်ဆံရတာ ပိုပြီး Hot စေဖို့ သငျ့မိနျးမနဲ့ ဆကျဆံရတာ ပိုပွီး Hot စဖေို့ ဝင်တယ်၊ ထွက်တယ်၊ မိနစ် ၂၀ ကြာတော့ တီဗွီသွားကြည့်တယ်။ သင်တို့် လက်ထပ်တာ နှစ် ၂၀ လောက် ကြာပြီဆိုရင်တော့ သင်တို့ လင်မယားရဲ့ လိင်ဆက်ဆံရေးဟာ
အိပ်မက်တွေ လက်တွေ့ဖြစ်လာဖို့ လိုအပ်ချက်များ
အိပ်မက်တွေ လက်တွေ့ဖြစ်လာဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခု အိပျမကျတှေ လကျတှဖွေ့ဈလာဖို့ နညျးလမျးတဈခု ဘ၀မှာ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာဖို့က ကျောထောက်နောက်ခံကောင်းပြီး ပင်ကိုယ်ပါရမီရှိတဲ့ သူတွေပဲ ဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်ဆိုရင် သင့်အိပ်မက်တွေ တကယ်ဖြစ်လာဖို့အတွက် လျို့ဝှက်နည်းလမ်းတစ်ခု ရှိပါတယ်။ ဒီလျို့ဝှက်နည်းလမ်းမှာပါဝင်တဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေ အကုန်လုံးနဲ့ ဖော်စပ်မယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေက လက်တွေ့အကောင်အထည်ပေါ်လာမှာ သေချာပါတယ်။
သုတျလှတျစောခွငျးအတှကျ နညျးလမျးကောငျးမြား သုတ်လွှတ်မစောအောင်ထိန်းလေ ပိုပြီးမြန်လေ ဖြစ်ဖူးပါသလား။ သင်တစ်ယောက်ထဲမဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာပေါ်က ယောကျာ်းတိုင်း တစ်ချိန်ချိန်မှာ ကြုံတွေ့ရမှာပါ။ အဲ့ဒါကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်း ၂ မျိုးနဲ့ ကုသရပါမယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတာ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ စိတ်ဖိအားတွေ လျော့နည်းသွားအောင် လုပ်ရမှာပါ။ သုတ်လွှတ်စောခြင်းအတွက် နည်းလမ်းတချို့ကို အောက်မှာပေးထားပါတယ်။
အောင်မြင်ချမ်းသာဖို့ နည်းလမ်း (၂၁)ခု
အောင်မြင်ချမ်းသာဖို့ နည်းလမ်း (၂၁)ခု အောငျမွငျခမျြးသာဖို့ နညျးလမျး (၂၁)ခု အောင်မြင်သူတိုင်းမှာ သာမန်လူတွေနဲ့ မတူညီတဲ့ အလေ့အကျင့်တွေရှိပါတယ်။ ဒီအလေ့အကျင့်တွေနဲ့ နေ့စဉ်ရှင်သန်နေထိုင်နေတာကြောင့်ပဲ အောင်မြင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့လည်း အောင်မြင်မှုနဲ့ ငွေကြေးချမ်းသာမှုကို ရယူနိုင်ဖို့အတွက် အောင်မြင်သူတွေရဲ့ အလေ့အကျင့်တွေရှိသင့်ပါတယ်။ ဒီအတွက် အောင်မြင်မှုနဲ့ ငွေကြေးချမ်းသာမှုကို ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်မယ့် အလေ့အကျင့်(၂၁)ခုကို
Steve Jobs ပြောသည့် ဘ၀သင်ခန်းစာ (၁၅)ခု
Steve Jobs ပွောသညျ့ ဘဝသငျခနျးစာ (၁၅)ခု Steve Jobs ပြောသည့် ဘ၀သင်ခန်းစာ (၁၅)ခု အိမ်သုံးကွန်ပျူတာ ခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးမှာ ဦးဆောင်ခဲ့သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်၊ Apple နည်းပညာကုမ္ပဏီရဲ့ ပူးတွဲတည်ထောင်သူ၊ ဥက္ကဌ၊ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Steve Jobs ဟာလေးစားထိုက်တဲ့ စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်တွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Steve Jobs ဟာ
စိတျပါဝငျစားခွငျး သင် လုပ်နေရတဲ့ အလုပ်အတွက် ရင်ခုန် စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့ဖူးတဲ့ အချိန်တစ်ခုကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ပြီးတော့ သင် လုပ်မှ ဖြစ်မှာမို့လို့ လုပ်နေရတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ သင့်ရဲ့ အလုပ်ပြီးမြောက်နိုင်စွမ်းနဲ့ အကျိုးရှိမှု ကွာမနေပါဘူးလား?? အခု ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ အဲဒိအချိန်တွေတုန်းက စိတ်ခံစားချက်တွေကိုတောင် ပြန်ခံစားမိလာတယ် မဟုတ်ပါလား??